Vaovao - Resaho ny momba ny "fihodinana sy fitetezana" ny valva
Iray, nymiditra tsimoramoraleakage, fepetra fisorohana ny fivoahan'ny etona.
1. Ny valves rehetra dia tsy maintsy iharan'ny fitsapana hydraulika amin'ny naoty samihafa rehefa avy niditra tao amin'ny orinasa.
2. Ilaina ny disassemble sy ny fanamboarana ny valva dia tsy maintsy ho tany.
3. Mandritra ny fanamboarana be loatra, jereo raha ampiana ny coiling ary mihamafy ny fihary coiling.
4 valva alohan'ny fametrahana dia tsy maintsy manamarina raha misy vovoka, fasika, oksizenina vy ary potipoti-javatra hafa ao anatin'ny valva.Raha toa ka tsy maintsy diovina mialoha ny fametrahana ireo fitaovana etsy ambony.
5. Ny valves rehetra dia tsy maintsy apetraka amin'ny gaskets amin'ny kilasy mifanaraka amin'izany alohan'ny fametrahana azy.
6. Henjana ny fasteners rehefa mametraka ny flange varavarana, ary henjana ny flange bolts amin`ny symmetrical tari-dalana.
7. Amin'ny dingan'ny fametrahana valva, ny valves rehetra dia tsy maintsy apetraka tsara araka ny rafitra sy ny tsindry, ary voarara tanteraka ny fametrahana kisendrasendra sy mifangaro.Ho an'ity tanjona ity, ny valves rehetra dia tsy maintsy isaina sy voarakitra an-tsoratra araka ny rafitra alohan'ny fametrahana azy.
Faharoa, momba ny fisorohana ny fiparitahan'ny saribao.
1. Ny flanges rehetra dia tsy maintsy apetraka amin'ny fitaovana famehezana.
2. Ny faritra mora vaky vovoka dia ny fanafarana sy fanondranana arintany valva amin'ny fikosoham-bary, mpanome saribao, flanges mpanamboatra, ary ny ampahany rehetra mifandray amin'ny flanges.Noho izany, hanao fisafoana feno amin'ny ampahany amin'ny fitaovan'ny mpanamboatra rehetra izay mety mitete vovoka.Raha tsy misy fitaovana famehezana, dia hanatanteraka reinstallation faharoa sy hanenjanana kokoa ny fasteners.
3. Ny trangan-javatra ny vovoka leakage mety hitranga ao amin'ny welding fiaraha-miasa ny pulverized arintany sodina, dia handray ireto fepetra manaraka ireto.
3.1 Alohan'ny hanaovana lasantsy, ny faritra iraisan'ny lasantsy dia tsy maintsy voaporitra tsara amin'ny famirapiratan'ny metaly ary voapoizina amin'ny gorodona ilaina.
3.2 Ny elanelana mifanandrify dia tsy maintsy atokana alohan'ny fifanandrinana, ary voarara tanteraka ny fanerena ny fifanandrinana.
3.3 Ny fitaovana welding dia tsy maintsy ampiasaina araka ny tokony ho izy, ary tsy maintsy afanaina mialoha araka izay takiana amin'ny andro mangatsiaka.
Telo, ny fiparitahan'ny rafitra solika, ny fandehanana solika ary ny fepetra fisorohana hafa.
1. Tena zava-dehibe ny manao tsara ny leakage sy ny menaka mandeha ny rafitra solika.
2. Jereo sy diovy tsara ny rafitra amin'ny fitoeran-tsolika fitehirizana solika alohan'ny hametrahana azy.
3. Ny fitsapana hydraulika dia tsy maintsy atao amin'ny fitaovana miaraka amin'ny cooler solika.
4. Ny fitsapana hydraulika sy ny asa fanangonana dia tokony hatao ihany koa ho an'ny rafitra fantsona solika.
5. Ao amin'ny dingan'ny fametrahana ny fantsona solika, ny flange tonon-taolana rehetra na ny tonon-taolana velona amin'ny silk buckle dia tsy maintsy apetraka amin'ny menaka-mahatohitra fingotra pad na menaka-mahatohitra asbestos pad.
6. Ny teboka leakage amin'ny rafitry ny solika dia mifantoka indrindra amin'ny flange sy ny kofehy velona, ​​ka ny bolts dia tsy maintsy henjana tsara rehefa mametraka ny flange.Misoroka ny fivoahana na ny fihenjanana.
7. Amin'ny dingan'ny fanivanana menaka, ny mpiasan'ny fanorenana dia tsy maintsy mifikitra hatrany amin'ny andraikiny, ary voarara mafy ny miala na miampita toby.
8. Tsy maintsy ajanona ny sivana menaka alohan'ny hanoloana ny taratasy sivana menaka.
9. Rehefa mametraka ny sodina fifandraisana sivana solika vonjimaika (hose plastika mangarahara avo lenta), dia tsy maintsy afatotra mafy amin'ny tariby firaka ny fiarahana mba hisorohana ny trangan-javatra mandositra menaka rehefa mandeha ny sivana solika nandritra ny fotoana ela.
10. Mametraka mpiasan'ny fanorenana tompon'andraikitra hikarakara ny asan'ny sivana solika.
11. Alohan'ny hanombohan'ny rafitry ny solika fanampiny ny tsingerin'ny solika, ny departemantan'ny injeniera dia mandamina ireo olona tompon'andraikitra amin'ny tsingerin'ny solika fanampiny mba hanao fanambarana ara-teknika amin'ny antsipiriany.
Iv.Misoroka ny miboiboika, miboiboika, mitete ary mitete amin'ny fitambaran'ny fitaovana sy ny fantsona fantsona.Misy ireto fepetra fisorohana ireto:
1. metaly miolikolika gaskets dia ampiasaina ho flange gaskets ambonin'ny 2.5mpa.
2, 1.0Mpa-2.5mpa flange gaskets, asbestos gaskets, ary mifono vovoka firaka mainty.
3, ambanin'ny 1.0mpa rano fantsona flange famehezana pad amin'ny fingotra pad, ary mifono amin'ny mainty firaka vovoka.
4, rano paompy coil dia vita amin'ny PTFE fibre mitambatra coil.
5. Ho an'ny famehezana ny ampahany amin'ny setroka sy ny fantsona arintany rivotra, ny tady asbestos dia mihodinkodina ary ampidirina amin'ny habakabaka miaraka amin'ny fotoana iray.Voarara mafy ny hanenjanana ny screws rehefa avy mafy mitambatra.
Dimy, manala ny valve leakage manana ireto fepetra manaraka ireto ho an'ny fivoahan'ny valve dia tokony hanao ireto fepetra manaraka ireto isika)
1. Ny fahatsiarovan-tena tsara dia tsy maintsy apetraka amin'ny fametrahana sy ny fananganana fantsona, ary ny takelaka oxide sy ny rindrin'ny fantsona dia tsy maintsy diovina am-pahamarinana, tsy mamela zavatra hafa ary miantoka ny fahadiovan'ny rindrina anatiny amin'ny fantsona.
2. Voalohany, ho azo antoka fa ny 100% ny valves miditra ny toerana dia tsy maintsy ho hydrostatic fitsapana.
3. Tokony hatao amim-pahamatorana ny fikosoham-bary.Ny valves rehetra (afa-tsy ny valves nafarana) dia tokony halefa any amin'ny ekipan'ny fikosoham-bary ho an'ny fisafoana, fikosoham-bary ary fikojakojana, ary ny fanatanterahana ny andraikitra, mirakitra an-tsoratra sy mamantatra, mora ny miverina.Ny valves manan-danja dia tokony mitanisa ny antsipiriany momba ny fanekena faharoa, mba hahafeno ny fepetra takian'ny "fanitsiana, fanamarinana ary firaketana".
4. Tokony ho tapa-kevitra mialoha ny varavarana fidirana amin'ny rano voalohany sy ny varavarana fivoahana.Ireo valves ireo ihany no avela hisokatra mandritra ny fitsapana hydrostatic, ary ny valves hafa dia tsy avela hisokatra amin'ny sitrapony, mba hiarovana ny fototry ny valva.
5. Rehefa mikoriana ny fantsona dia velomy sy vonoy moramora mba hisorohana ny fahasimban'ny spool.
Raha miporitsaka dia inona no antony?
(1) ny fifandraisana eo amin'ny faritra fanokafana sy fanakatonana ary ny famehezana ny sezan'ny valve;
(2) famonosana sy taho ary boaty famonosana;
(3) ny fifandraisana misy eo amin'ny vatan'ny valva sy ny fonon'ny valva
Ny iray amin'ireo leakage teo aloha dia antsoina hoe leakage anatiny, izay matetika lazaina fa lax, dia hisy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny valve hanapaka ny fitaovana.Ny leakage roa farany dia antsoina hoe leakage ivelany, izany hoe, ny fivoahan'ny media avy amin'ny valva mankany amin'ny valva ivelany.Hiteraka fatiantoka ara-materialy, fahalotoan’ny tontolo iainana, loza mety hitranga ihany koa ny fivoahana.
Fahalavoana amin'ny toerana tena izy, ny famakafakana ny leakage anatiny, ny leakage anatiny dia amin'ny ankapobeny:
Ny valva dia manana fenitry ny fivoahana anatiny azo ekena araka ny kaliber, ny tsindry amin'ny rafitra ary ny media system.Amin'ny heviny henjana dia tsy misy ny valve leakage marina '0′.Amin'ny ankapobeny, ny valves globe savaivony kely dia mora ny mahatratra leakage tsy hita maso (tsy leakage aotra), fa ny vavahady savaivony savaivony dia sarotra ny hahatratra leakage tsy hita maso.Raha misy leakage anatiny ny valva, voalohany indrindra, dia tokony hiezaka ny hahatakatra ny manokana leakage anatiny, manondro ny valve leakage fenitra, anatiny leakage mitranga rehefa ny rafitra miasa tontolo iainana sy ny anton-javatra hafa ho an'ny fanadihadiana feno, mba marina. tsarao ny leakage anatiny ny valva.
(1) Ny olana leakage anatiny amin'ny valva vavahady parallèle.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny valva vavahady parallèle dia ny miantehitra amin'ny fanerena samihafa amin'ny rafitra mankany amin'ny sisin'ny spool sy ny famehezana seza fanerena ambonin'ny, raha ny tsindry rafitra ambany dia ambany, dia mety hisy tranga leakage anatiny kely aorian'ny valva. .Raha misy leakage anatiny toy izany, dia asaina manohy mijery sy manamarina ny famehezana ny valva rehefa mahatratra ny fanerena famolavolana na ny fanerena miasa ara-dalàna ny fanerena ny rafitra.Raha misy leakage be loatra, dia tokony ho levona sy hanoto ny famehezana ambonin`ny valva.
(2) leakage anatiny ny wedge valva.
Indraindray dia noho ny fomba fanaraha-maso valves samy hafa, satria ny mpanamboatra rehefa ny famolavolana fifantenana, ny mifanaraka taho sy taho voanjo dia ny tanjaky ny famolavolana tsy nihevitra Torque fomba fanaraha-maso, ary mampiasa ny kapoka fomba fanaraha-maso, raha voatery handeha any. ny fomba fanaraha-maso mihidy toerana ho an'ny Torque fanaraha-maso, dia mety hiteraka fahavoazana ho an'ny valva taho voanjo, sns miaraka amin'izay koa, dia mitarika ho amin'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra loha rehefa misokatra sy ny fanokafana Torque fahadisoana fanairana.Raha misy leakage anatiny amin'ity valva ity, matetika dia mihidy amin'ny tanana izany aorian'ny fanakatonana herinaratra, ary avy eo mihidy.Raha mbola misy leakage anatiny aorian'ny fanakatonana ny boky, dia manondro fa misy olana ny famehezana ny valva, ary avy eo dia mila rava sy tany.
(3) leakage anatiny ny check valve.
Ny famehezana valva famehezana dia miankina amin'ny fahasamihafan'ny tsindry amin'ny rafitra ihany koa, rehefa ambany dia ambany ny tsindrin'ny tsindrin-tsakafon'ny valva, dia hisy fiakarana kely ihany koa ny fanerena fivoahana, avy eo dia tokony hodinihina amin'ny lafin-javatra isan-karazany, hamaritana ny leakage anatiny , araka ny fanadihadiana ny rafitra mba hanapa-kevitra na handray ny asa fanamboarana ara-batana.
(4) Leakage anatiny ny savaivony kapila valves.
Ny fenitry ny leakage anatiny ny savaivony kapila valves dia amin'ny ankapobeny tena lehibe.Rehefa mitombo ny tsindry amin'ny fidirana dia hitombo ihany koa ny tsindry mivoaka.Ho an'ity olana ity dia tokony hotsaraina aloha ny fivoahana anatiny, ary ny fanapahan-kevitra momba ny fanamboarana na tsia dia tokony horaisina araka ny fivoahana anatiny.
(5) ny leakage anatiny amin'ny valva fanaraha-maso.
Satria ny endriky ny valva mandrindra dia tsy mitovy, ny fenitry ny leakage anatiny dia tsy mitovy, miaraka amin'izay koa, ny valva mandrindra dia matetika ampiasaina amin'ny fomba fanaraha-maso kapoka, (tsy mampiasa fanaraha-maso torque), noho izany dia misy ny anatiny amin'ny ankapobeny. tranga leakage.Ny olana amin'ny leakage anatiny amin'ny valva fanaraha-maso dia tokony hokarakaraina amin'ny fomba hafa, ary ny valva mandrindra miaraka amin'ny fepetra manokana amin'ny leakage anatiny dia tokony hodinihina amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana.Betsaka ny fifanoherana toy izany ao amin'ny Toby Nokleary XX.Valve maro no voatery ovaina ho fanaraha-maso torque, izay manimba ny asan'ny valva mandrindra.
Mba ho voafaritra kokoa:
(1) Ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny fitsaboana ny hafanana amin'ny faritra anatiny, ny hamafin'ny tsy ampy, mora simba amin'ny tsiranoka haingam-pandeha.
(2) Noho ny fetran'ny firafitry ny valva, ny fluid amin'ny alàlan'ny angovo (hafainganam-pandeha) dia tsy misy fanjifana mahomby, misy fiantraikany amin'ny herin'ny famehezana;Ny hafainganam-pandeha tafahoatra dia mitarika ho amin'ny tsindry kely loatra ao ambadiky ny valva, izay ambany noho ny fanerena saturation, ka miteraka cavitation.Ao amin'ny dingan'ny cavitation, ny angovo rehetra rehefa mipoaka ny bubble dia mifantoka amin'ny teboka vaky, ka miteraka Newtons an'arivony ny hery fiantraika, ary ny fanerena ny onjan'ny fahatafintohinana dia avo toy ny 2 × 103Mpa, izay mihoatra ny fetran'ny tsy fahombiazan'ny harerahana. fitaovana metaly efa misy.Mety ho simba sy mitete ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ireo kapila mafy sy seza mafy be.
(3) Ny valva dia miasa amin'ny fanjakana kely fanokafana mandritra ny fotoana maharitra, ny taham-pidirana dia avo loatra, ny herin'ny fiantraikany lehibe, ary ny ampahany anatiny amin'ny valva dia mora simba.